Bwin သည်€၏အပိုဆုကြေးပေးသည် 120 သင်အားကစားအတွက်လောင်းကစားအတွက်ယူရို! သင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၌သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ bwin ချီးမြှင့်လိမ့်မည်. ပြီးတော့မင်းကပိုက္တယ်, ပါရီသည်သင့်အားငွေပြန်အမ်းသည့်လက်ကျန်ငွေကိုပေးသည် 25% သင်၏အလောင်းအစားများ.
အားကစားလောင်းကစားခြင်းများတွင် Bwin ဆုကြေးငွေ
အကယ်၍ သင်၏ပထမဆုံးအားကစားအလောင်းအစားရှုံးလျှင်, မင်း Bwin ပေးချေပြီ 107 ယူရို!
ဤ Bwin မှကြိုဆိုသည့်အပိုဆုကြေးကိုရယူရန်:
အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လောင်းပါ 30 သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း
သင်၏အလောင်းအစားနိုင်လျှင်, သငျသညျအတွင်းအပိုဆုရပါလိမ့်မယ် 48 ရလဒ်ပြီးနောက်နာရီ
သင်လောင်းလျှင် 10 ယူရို, ရလိမ့်မယ် 10 ယူရို.
Bwin အားကစားလောင်းကစားဆုကြေးငွေ : စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ
ဒီမဟုတ်ဘဲစိတ်ဝင်စားဖို့ဆုကြေးငွေအပြည့်အဝအားသာချက်ယူရန်, ဤနေရာတွင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်သည့်အောက်ရှိစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများဖြစ်ကြသည်:
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုပေါင်းစပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရနိုင်ပါ. သင်၏အကောင့်ကိုအမြတ်အစွန်းအတွက်မပိတ်နိုင်ပါ. ဤအပြုအမူအမျိုးအစားကိုလောင်းကစားခြင်းဖြင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းဟုသတ်မှတ်ပြီးသင်၏အကောင့်ကိုအမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းနိုင်သည်။.
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်ငွေပေးချေမှုပုံစံအတွက်မှန်ကန်သည်: MasterCard, ဗီဇာ, PayPal, PaySafeCard, 1-Skrill ကိုအသာပုတ်ပါ, Neteller, လက်မှတ်ပရီမီယံနှင့် Promocode.
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်အချို့သောအလောင်းအစားများကိုသာကန့်သတ်ထားသည်. ယခင်ကမ်းလှမ်းချက်မှအခမဲ့လောင်းကြေးမပေးသင့်ပါ. သို့သော်အလောင်းအစားတစ်ခုတည်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအလောင်းအစားများရှုံးသည်, ရိုးရာအားကစား paris paris နှင့်ဘဝ.
ဒီ Bwin ဆုကြေး၏အခြေအနေများကဘာတွေလဲ ?
သူအနည်းဆုံးငွေသွင်းရမည် 10 ယူရိုနှင့်အနည်းဆုံးလောင်းကြေးကိုလောင်းခြင်း5ယူရို.
သင်ဤအားကစားနှင့်အလောင်းအစားအမျိုးအစားအပေါ်ဤပထမဆုံးလောင်းနိုင်သည် (ရိုးရှင်း, ပေါင်းစပ်, Pre- ပွဲစဉ်, တိုက်ရိုက်), စနစ်အလောင်းအစားမဟုတ်လျှင်.
ပထမလောင်းကြေးကိုနောက်ဆုံးပေါ်လောင်းရမည် 30 ကန ဦး ငွေသားသိုက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း.
အကယ်၍ ပထမဆုံးလောင်းကြေးဆုံးရှုံးလျှင်, အခမဲ့လောင်းကစားများတိုးမြှင့်ခြင်းအတွင်းအလိုအလျောက်ပေးဆောင်ရသည် 48 ရွေးချယ်ထားသည့်ဂိမ်းအပြီးတွင်နာရီ.
ပြီးတာနဲ့အသိအမှတ်ပြု, အခမဲ့အလောင်းအစားလွှဲပြောင်းနှင့်အတူဖျက်သိမ်းမရပါနှင့်အတွင်းကစားရပါမည်7ရက်ပေါင်း.
bwin တွင်, အလောင်းအစားများ၏ပမာဏကိုမေးခွန်းများစွာအတွက်ပျံ့နှံ့။ မရပါ.
သင်အလောင်းအစားလုပ်ပြီးအလောင်းအစားတစ်ခုနှင့်အနိုင်ရသောအခါ, သင်အောက်ဆုံးလိုင်းမရကြဘူး, အလောင်းအစားပမာဏကိုလျှော့သည်.
ပထမဆုံးအလောင်းအစား (သို့မဟုတ်) အလောင်းအစားအတွက်အနိမ့်ဆုံးကြယ်များရှိသည်.
အသေးစိတ်အတွက်, bwin ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အပြည့်အဝစည်းကမ်းချက်များကိုကြည့်ပါ.
အပိုဆု Bwin ဖဲချပ်ဝေ
Bwin အစားထိုးခြင်းဖြင့်သာလွန်သစ္စာရှိမှုနှင့်ဆုကြေးငွေဆုချီးမြှင့် 25% cashback ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်တစ်အထုပ်အနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်း 5000 World Poker Tour မှာ.
cashback subscribe ဖို့ "မြှင့်တင်ရေး" ၌.
ကစားသည်, တိုင်း2သင်ရလိမ့်မည်အချက်များ 1 ယူရို scan ကို.
အနည်းဆုံးသင်စုဆောင်းပါကငွေပြန်အမ်းနိုင်မည် 25 မှတ်.
အပိုဆု Bwin ဖဲချပ်ဝေ : စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများ
ဒီမြှင့်တင်ရေးကိုငွေအစစ်အမှန်ရှိတဲ့အကောင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကမသုံးနိုင်ဘူး. Poker ဂိမ်းများတွင်ရမှတ်များသည်စုဆောင်းရရှိလိမ့်မည်.
အခြား Bwin အပိုဆု
စံကြိုဆိုဆုကြေးငွေအပြင်, Bwin သည်လောင်းကစားတစ်နှစ်ပတ်လုံးအရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်ဂိမ်းများစွာကစားနိုင်သည်.
Multicash ရွေးချယ်မှု: နောက်တဖန်အနိုင်ရ!
တက်အနိုင်ရဖို့ Multicash option ကို 50% ပိုအစစ်အမှန်ပိုက်ဆံ. သင်ပိုမိုရွေးချယ်မှုလုပ်ပါ, သင့်ဝင်ငွေမြင့်လေလေ.
မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, စုပေါင်းအလောင်းအစားလုပ်ပါ3မှာ 20 အများဆုံးအလောင်းအစားနှင့်တိုက်ဆိုင် 50 ယူရို.
သင့်အကောင့်ကအကြွေးတင်လိမ့်မယ် 50% သင်၏အပိုဝင်ငွေ, အတွက်ရလဒ်အပြီးတစ်ရက် 14 နာရီ.
တနင်္ဂနွေတစ်လျှောက်လုံး, သင်အနည်းဆုံးပြန်လည်ရယူရန်သေချာသည့်“ အာမခံထားသောတနင်္ဂနွေ” ပရိုမို၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူပါ 50% စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ဘောလုံးပွဲအတွက်သင်ပြုလုပ်သောအလောင်းအစားများ.
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကနေအကျိုးခံစားရဖို့, bwin ကိုသာမှတ်ပုံတင်ပါ, ပေါ်ရှိပေါင်းစပ်ရာအရပျ4နိမ့်ဆုံးရမှတ်နှင့်အတူနိမ့်ဆုံးရွေးချယ်စရာ 3,00. သင်ရှုံးမယ်ဆိုရင် 50% သင်၏အလောင်းအစားများအားတနင်္လာနေ့တွင်ပြန်ပေးလိမ့်မည်.
ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်သာတရားဝင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ 10 တစ်ရက်လျှင်ယူရိုသို့မဟုတ် 20 တနင်္ဂနွေအတွက်€, သင်၏လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်.
သင် log in လုပ်တဲ့အခါ, ထုတ်ယူခြင်းကိုရယူပါ, parameters တွေကိုစာရင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်, သင်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ. ငွေလွှဲမှုအောင်မြင်ကြောင်းအီးမေးလ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
သင်၏တောင်းဆိုမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်သည်. သင်၏လျှောက်လွှာသည် "ဆိုင်းငံ့ထားသော" အခြေအနေရှိပါက, သင်ထုတ်ယူမှုအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသင်ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီးငွေကိုသင်၏အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်၏ bwin ဆုကြေးဘယ်မှာရှာနိုင်မှာပါ?
Histotic သည်သင်၏လက်ကျန်ငွေကို“ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏အပိုဆုကြေး” တွင်ရှာပါ။. "သမိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေးငွေ" ထဲမှာ, အပိုဆုကြေးတစ်ခုကို My My Promotions ကဏ္sectionတွင်တွေ့ပြီဖြစ်သည်။ သင်သည်ကတ်ပြားကဲ့သို့သောပရိုမိုးရှင်းများ၏တိုးတက်မှုကိုသင်လိုက်နာနိုင်သည်။, အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မြှင့်တင်ရေးအချက်များ။.
Previous Previous post: Bwin ပြင်သစ်
Next Next post: Osiris ကာစီနို